Suuqyada Muqdisho oo maanta laga waayay hilibka Geela. – XAMAR POST
Caasimada Muqdisho, Saakay Suuqyadii lagu iibinayay hilibka Geela waa laga waayay oo waa ay haawanayaan dhammaantood, iyadoo loo sababeeyay khilaaf soo kale dhexgalay Ganacsata hilibka Geela iyo kuwa dalaaleyda ah.
Ganacsatada qaar oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in neefka geela lagu kordhiyay lacaho dheeraad ah sanadihii ugu dambeeyay islamarkaana taasi ay saameyn weyn ku yeelatay iyaga.
Sidoo kale, waxaa ay tilmaameyn in nimanka Geeleyda ah iyo kuwa ka Ganacsada aysan us arkin, balse ay ay u dhaxeeyaan dalaaleyda, taasi ayeyna ku sheegeen in ay tahay dhibaatada iyo sicir bararka ka jira gobolka Banaadir.
Ganacsatada Hilibka Geela iibisa ayaa sidoo kale, sheegay in hadii arrintaan wax laga qaban waayo ay maalmaha soo socda qaban doonaan dibad bax ku aadan arrintaan, maadama ay saameyn xoogleh ay ku yeelatay.
Shacabka Muqdisho ayaa aad u hadal hayo hilibka Geela oo ka maqan Suuqyada Muqdisho, waxaa ay dhankooda sheegayaan in uu saameyn ku yeeshay, maadama uu qeyb ka yahay cuntada aysan ka maarmi Karin.
Dhinaca kale Suuqyada Muqdisho, ayaa laga helayaa kaliya Hilibka Ariga, kan Idaha hilibka cadka sida Digaaga iyo kaluunka kuwaa oo aan loo dhawaan Karin, maadama sicirkooda uu aad u sarreeyo, iyadoo taninah ay saameyn ku yeelatay dadka danta yar.